Pedro - Ho avy amin'ny fikorontananana sy fisarahana - Fanapahana ny fanjakana
Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny	Pedro Regis	on October 24, 2020:
Anaka malala, tiako ianareo tahaka anao ary mangataka anao aho mba ho ao amin'ny Zanako Jesosy. Mijoroa ho vavolombelona amin'ny toerana rehetra amin'ny herimpo amin'ireo fahamarinana nambaran'i Jesosy sy narovan'ny Fiangonany tamin'ny alalàn'ny Magisterium tena izy. Miaina amin'ny fotoan'ny fitsapana mafy ianao, nefa aza matahotra. Na iza na iza miaraka amin'ny Tompo dia tsy hiaina ny lanjan'ny faharesena velively. Mangataka anao aho mba hihazona ny lelafon'ny finoanao ho tsara. Aza avela hitarika anao hiala amin'ny lalan'ny famonjena ny haizin'ny devoly. Handeha amin'ny ho avy misy fikorontanan-tsaina sy fizarazarana lehibe ianao. Aza mamela na inona na inona hampisaraka anao amin'i Jesosy. Miondrika am-bavaka. Amin'ny alàlan'ny vavaka ihany no ahafahanao mizaka ny lanjan'ny fisedrana ho avy. Mitadiava tanjaka amin'ny Tenin'i Jesosy ary amin'ny Eokaristia. Mandrosoa amin'ny lalan'ny fahamarinana. Hivavaka amin'ny Jesosy aho ho anao. Ity no hafatra omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao amin'ny namelanao ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
← Medjugorje - Te Hiady i Satana…
Ny vatana, mamaky →